काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै कोरोना संक्रमित, भरिँदै अस्पताल [कति छन् शय्या, कति उपचाररत?]
२०७७ असार २३ मंगलबार २०:२३:०० प्रकाशित
काठमाडौं - नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्याले १६ हजार नाघेको छ। पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने देशभर संक्रमितको संख्या केही घट्दो छ। त्यसको ठिक विपरित काठमाडौं उपत्यकामा भने संक्रमितको संख्या बढ्दो छ।
मंगलबार देशभर २ सय ४ जना संक्रमित भेटिए। जसमध्ये २८ जना काठमाडौं उपत्यकामा पुष्टि भएका संक्रमितहरु हुन्। काठमाडौंमा १४ जना, ललितपुरमा १० र भक्तपुरमा ४ जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यसअघि सोमबार मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ५४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आइतबार पनि काठमाडौं उपत्यकामा ३० जना कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। यसले पनि काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको प्रष्ट पार्छ र दैनिक संक्रमित भेटिन थालेको पुष्टि गर्छ।
हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ सय ६७ जना संक्रमित भेटिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ सय ७५, ललितपुरमा ४९ र भक्तपुरमा ४३ जना संक्रमित छन्। यी संक्रमितहरुको हाल उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अस्पतालको शय्या पनि भरिँदै गएको छ।
काठमाडौंको बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित उपचाररत छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार हुने पाटन अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हाल कति संक्रमित उपचाररत छन्, कति डिस्चार्ज भए र ती अस्पतालमा कति क्षमता छ? लगायत विषयमा यी अस्पतालहरुसँग हामीले बुझेका छौं।
काठमाडौंको बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा हाल ९३ जना संक्रमित उपचाररत छन्। १० जना शंकास्पद बिरामी पनि उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालबाट हालसम्म ६२ जना उपचारपछि डिस्जार्च भइसकेका छन्। अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि १ सय २० शय्याको आइसोलेसन छुट्याएको छ। गम्भीर खालका संक्रमितका लागि २० वटा आइसियु शय्याको व्यवस्था गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। १ सय २० आइसोलेसन शय्यामध्ये ९३ संक्रमित उपचाररत रहँदा २७ शय्या खाली छ।
पाटन अस्पतालमा हालसम्म ८ सय ११ जना शंकास्पद बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन्। जसमध्ये ९७ जनामा कोरोना पुष्टि भई भर्ना भएको अस्पतालका निर्देशक डा विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
कुल ९७ जना संक्रमित मध्ये ४७ जना उपचाररत छन्। बाँकी ५० जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएको डा शर्माले जानकारी दिए। अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ४५ शय्या, १५ वटा आइसोलेसन, २१ वटा आइसियु र १४ वटा भेन्टिलेटर सहितको शय्याको व्यवस्था गरेको छ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)
काठमाडौं मेडिकल कलेजले कोरोना पुष्टि भएका संक्रमितलाई दुवाकोटमा रहेको कोभिड अस्पताल उपचार गर्दै आएको छ। हालसम्म ४३ जना संक्रमित भर्ना भएको अस्पतालकी प्राचार्य डा चन्दा कार्कीले जानकारी दिइन्। जसमध्ये सिनामंगलमा रहेको अस्पतालमा ८ र दुवाकोटमा ३५ जना संक्रमित भर्ना भएका छन्।
कुल संक्रमितमध्ये हालसम्म १५ जनालाई यस अस्पतालले निको बनाएर घर पठाइसकेको छ। हाल २८ जना संक्रमित उपचाररत छन्।
संक्रमितको उपचारका लागि केएमसीले १ सय २२ शय्याको कोभिड वार्डको व्यवस्था गरेको डा कार्कीले जानकारी दिइन्। जसमध्ये १० आइसियु र २ वटा भेन्टिलेटर छन्।
सिनामंगलमा शंकास्पद बिरामीलाई राख्नका लागि ५७ वटा प्रि–आइसोलेसन वार्डको समेत व्यवस्था गरेको छ। यस अस्पतालले कोरोना संक्रमितसँगै अन्य बिरामीको उपचारका लागि थप सतर्कता अपनाएको डा कार्कीले बताइन्।
यस अन्तर्गत अस्पतालले शंकास्पद बिरामीको शल्यक्रियाका लागि छुट्टै अपरेशन थिएटरको व्यवस्था गरेको छ। प्रसूति सेवाका लागि भने तीन ठाउँमा व्यवस्था गरेको अस्पतालले जनाएको छ। जसमा जेनरल, शकांस्पद र संक्रमित महिलाको प्रसूतिका लागि तीन ठाउँको व्यवस्था गरेको हो।
तीन महिनाको अवधिमा यस अस्पतालबाट २ लाख ४ हजार ८ सय ९९ जनाले ओपिडी लिएका छन्। ६ सय ९२ जनाको शल्यक्रिया गरेको छ भने ४ सय ९८ जना सुत्केरी भएका छन्।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले शुक्रराज अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाएको छ।
अस्पतालका प्रवक्ता डा अनुप बास्तोलाका अनुसार यस अस्पतालमा हालसम्म ७५ जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका छन्। जसमध्ये ५२ जना डिस्चार्ज भएका छन्। बाँकी २३ जनाको उपचारमा यस अस्पताल र यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरु दिनरात खटिरहेका छन्।
अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ३४ आइसोलेसन शय्या, २० आइसियु र ९ वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छ। कुल संक्रमितमध्ये ३३ प्रतिशतमा मात्र हल्का खालको लक्षण देखिएको डा बास्तोलाले जानकारी दिए। हालसम्म कुनै पनि संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नु नपरेको उनले बताए।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हाल ९ जना संक्रमित उपचाररत छन्। हालसम्म यस अस्पतालमा २१ जना संक्रमित भर्ना भएको अस्पतालका कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा सन्तकुमार दासले जानकारी दिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले २६ आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरेको छ। जसमध्ये १३ आइसोलेसन शय्या संक्रमित र १३ आइसोलेसन शय्या शंकास्पदका लागि भनी छुट्याएको डा दासले बताए।
यस्तै, ५ आइसियु शय्या संक्रमित र ४ आइसियु शंकास्पदका लागि भनी अस्पतालले आइसियुको व्यवस्था गरेको छ। ९ वटा भेन्टिलर छुट्याएको छ। अस्पतालले कोभिड इमरजेन्सीका लागि भन्दै छुट्टै १६ शय्याको पनि व्यवस्था गरेको डा दासले जानकारी दिए।